Kungani i-WiFi yakho iphumelela futhi Ungayilungisa kanjani?
9 Kwangathi 2017
Kungani i-WiFi yakho iphumelela nokuthi ungayilungisa kanjani
Kungani i-WiFi iphumelela
Iziteshi nama Frequencies
Cishe I-Wifi Sucks kumanethiwekhi asekhaya. Sonke sikhuthazele ukukhishwa kabi kwe-WiFi yasendlini kanye nokuhlukana okulandelayo, ukuhlukana, nokulungiswa kwendawo ngokungahambisani nokukholelwa kwezinkolelo. Uma ngabe uyilungisile le-IT, ufuna indlela yokwethula ngokucacile kubangani bomndeni nabangane ukuthi kungani ukuphazamiseka okubambisene nazo izinhlelo zabo zokutholwa komshini ngeke kusebenze - futhi kuyokwenzenjani?
Uma kungenzeka ukuthi awujwayele i-IT futhi ucinga indlela yokuthola ulwazi oluqinile lokuhlehlisa uhlelo lwe-WiFi, lokhu okuthunyelwe kuyisisekelo esiwusizo ekuhleleni kwe-WiFi kanye nencwadi yokusebenzisa ikhaya lakho njengetayitela yokuzikhandla lezimfanelo ozisebenzisayo usuku ngalunye njenge-Genius ye-IT.
I-WiFi ngokwemvelo yayo ibuhlungu kakhulu kune-wired ngokuphathelene nekhwalithi engaqinisekisiwe kanye namandla esignali. Izimpawu ezihamba ngaphezu kwezinto ezibonakalayo ezifana netambo zinendlela ezwakalayo. Izimpawu ezingenantambo zingabelana futhi zizolahlekelwa amandla azo ezikude kakhulu ezivela emthonjeni wokudlulisela. I-WiFi inokwethenjelwa ukuhweba, kodwa yiyona eyodwa abantu abaningi abazimisele ukuyenza - ayikho indawo yomhlangano we-ethernet ingxenye enkulu yamagadabi ethu asekhaya. Ngakho-ke sizinikela amandla we-datastream yethu ngenhloso yokufaka ingubo eguquguqukayo ehambisana ne-ether. Konke okungcono esingakwenza ukugcwalisa izimbobo ezembotweni, okwenza kube khona ngisho nenkungu eqinile yomhlangano ehlanganisa yonke indawo yakho.
Shintsha ithrafikhi ye-web oversee. Ungathatha okungaphezulu mayelana nomthamo wabo futhi uhlanganyele ekuhlangenwe nakho kokuqala kukaKeith ngokushintshwa nokushintshwa. Kunoma yikuphi, ama-switches anikezwe yi-ISPs ngokuvamile amagajethi we-2-in-1. Zombili ziqondisa ukuhamba kwezimoto futhi zithumele izimpawu zomsakazo ezihlela ukuxhumana kwakho okungenantambo. Yilokho okushiwo yizingcingo ezitholayo ekushintsheni kwakho futhi ungase uzonywe ukuzitshengisa endaweni engafanele ekhaya lakho, kodwa izibonakaliso ezingenazintambo zihloswe ukuba zihlume futhi zikhulume emaphethelweni e-90-degree. Ngakho qinisekisa ukuthi zikhonjiswe ngokuphelele ngendlela efanayo, ngokuqondile noma ngokuqondile.
Ngenkathi isimo se-reception apparatus singase sithuthukise ububanzi, kungenzeka ukuthi ngeke sihlanganise indlu yakho yonke. Njengoba lezi zinguquko ze-2-in-1 zenza imisebenzi emibili kabili, futhi kukhona enye yazo, ngokuvamile ayiphumelelanga kakhulu kunezigajethi ezizinikeziwe ezibizwa nge-WiFi Access Points (WAP).
Umshini we-combo kanye negajethi yokusakazwa kwe-WiFi njalo izama ukwenza okuningi nokulwa ukunikeza indawo yonke ikhaya. Kunalokho, iphakethe le-WAP elivela kumthengisi ofanayo lizoxoxisana nomunye, futhi linikeze inamba enkulu kakhulu inetha lekhaya lakho.
Khumbula ukuthi lezi zimagajethi ziseyisignali yokukhiqiza esivamile, hhayi ngokuqondile. Uma kungenzeka ukuthi unendlu yendaba eningi ngeke udinga i-WAP engaphansi kweyodwa kwisitezi ngasinye.
Ama-WiFi anikwe amandla futhi amadivaysi okukhiqiza ama-WiFi angakwazi ukuxhumana ngenxa yokuthi basebenzisa izinga elifanayo lokuxhumana: izinga le-802.11, elichaza ukuthi amagajethi angakwazi kanjani ukuxhumana ngolwazi ngezindlela ezihlukene.
Ngaphakathi kwezinga le-802.11, kunezigaba zamashaneli ezihlukene ongazisebenzisa ukuxhumana, konke okungahambisani nemvume, okusho ukuthi ayilawulwa futhi awudingi ukukhathazeka ngemvume engavamile ukuxhumana nabo. Ziyingxenye enkulu yokubhaliswa kwebala elifushane, ngakho-ke izingxabano eziphawulekayo azibonakali - ngeke ukhulume ngokuphindaphindiwe okungaqondakali kusuka kuD DJ yakho yasekuseni. Kodwa-ke, izinombolo ezinkulu zeziteshi ziseduze futhi zivame kakhulu ukusakazwa kwe-WiFi kusuka ezindlini ezizakhelene nazo, noma ngisho nasezigayini ngaphakathi kwekhaya elifanayo, ukuba zivule iziteshi.
Ungakhetha phakathi kokubeka amagajethi akho ku-5GHz noma i-2.4 GHz. Ububanzi obanzi kunazo zonke yi-2.4 kanye neziteshi ezikuleso sikhawulo ezikude ngokwanele komunye nomunye ukungaxhunyiwe yi-1, 6, ne-11. Lezi yizinqumo ezivame kakhulu, futhi uma kwenzeka uzikhethela uzodinga ukuqinisekisa ukuthi awuhlanganisi nomakhelwane bakho.
Kodwa-ke, uma kwenzeka une-WAP noma ushintshela isiteshi esifanayo, kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka ukuthi enye yezintathu ezibhalwe ngenhla, zizobe zixube futhi zenze i-WiFi yakho ibe nzima. Kungase kudingeke ukuthi uhambise ku-5GHz ngenxa yokuthi nakuba ngabe isignali sinomkhawulo omfushane, lokho kuyinzuzo ngempela ngenxa yokuthi kuzoba khona iziteshi ezicacile lapho.
Iyini Network Time Protocol (NTP)? | Umhlahlandlela ophelele
Indlela Yokwakha Umsebenzi Wokuthengisa Nge-Digital?